အစားအသောက် buckwheat - Chocolate Slim
အစားအသောက် Buckwheat များအတွက် ၇-၁၄ ရက္နူးတစ်ဦးချင်းစီနေ့အဘို့
ပညာရှင်တွေအကြံပြုပါသည်အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှအစားအသောက် buckwheat များအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကြောင့်တတ်နိုင်သမျှကူညီဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်၊နှင့်ဇီဝြဖစ်ကြွက်သားသေံ။ ဆုံးနဲ့အရေး၊ buckwheat သည်တစ်ဦးကြောက်မက်ဖွယ်ရန်သူများ၏အဆီ။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့၊ဂျုံယာဂုသည်မရှိမဖြစ်အစားအသောက်ထုတ်ကုန်အလျင်အမြန်သက်သာခံစားချက်၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊သယ်ဆောင်ထွက်သန့်စင်မှုအနေဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အဆိပ်။
အဘိတ်၏ငြိမ်ဝပ်၊နိမ့်ငွေစရိတ်၊လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၏ဤသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွား၊ရွေးချယ်တဲ့အစားအသောက်အပေါ်အခြေခံ buckwheat။ ဒါဟာမှန်ကန်စွာစဉ်းစားမိဖုရား၏groats။ စွမ်းအင်နှင့်ဗီတာမင်၏တန်ဖိုးရှိအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုများလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်။
ချက်ပြုတ်ရန်ပန်းကန်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ညဦးယံအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရေအတွက်ကိုပြီးခဲ့သည့်တိုင်ထိုနေ့၏အဆုံး။ တနေ့သုံးကြိမ်တစ်မုန့်ညက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ၂၅၀ ဂရမ်ရယ်၊အရာပိုကောင်းအပေါင်းအတွက်ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုနှစ်ခွက်။
လျှင်အစားအစာအကြားသင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစား၊စား၏၃ အပိုင်းပိုင်းအခြောက်သီးနှံသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ချ။ ကြိုးစားသွားဖို့အိပ် ၂၂:၀၀ မှာနိုင်ဖို့အတွက်ခံစားရရန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်။
ရေသည်အဓိကကူညီမည်သည့်အစားအသောက်အလေးချိန်ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်။ ပင်လျှင်ခေတ်မီရေမ်က္ရည္ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ္တုဓာတ်၊အနည်းဆုံး thins အသွေး။
အမျိုးသမီးမကြာခဏဘယ်လိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပေါ်မှာထိုင်တစ်ဦးကအစားအသောက် buckwheat? အဖြေမရနိုငျထင်။ ဒါဟာအားလုံးအပေါ်မူတည်ချင်း၊သက်လုံနှင့်ကျန်းမာရေး။ နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂျပန်အစားအသောက်၊buckwheat များကြီးပိုမိုလွယ်ကူခန္ဓာကိုယ်ကသည်းခံ။
ငါသည်ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ် buckwheat လေ့ကျင့်ခန်းမရှိရင်
ဟုတ်ကဲ့၊သင်ကကိုယ်အလေးချိန်မပါဘဲသွားရောက်ကြည့်ရှုအားကစားရုံ။ အောင်မြင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်ဖြစ်နိုင်လျှင်အစားအသောက်များတွင်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်လျော့နည်းအဖြစ်ပို။ ကြောင်း၊အမျိုးစုံလင်ရန်အစားအသောက်ခွင့်ကိုသာအနိမ့်အဆီဒိန်ချဉ်။ ထိုအခါပင်သုံးရက်ဆန်လက္-အစားအသောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်ဆုံးရှုံးဖို့ ၅ မှ ၇ ကီလိုဂရမ်။
နမူနာအသီးအသီးနေ့(၇ နှင့် ၁၄ ရက်)
အများစုကနာမည်ကြီးလူအသုံးအစားအသောက် buckwheat။ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထွက်ခွာသောပမာဏမှာအခါး။
ဥပမာ၊နာမည်ကျော်အဆိုတော်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပင်တူကိုအသုံးပြုဆန် bulgur။ အခိုင်အတွက်ရေကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောမပါဘဲချက်ပြုတ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးကျွန်မသဘောပေါက်ကြောင်း buckwheat ကောင်းထက်ဆန် bulgur။ တစ်ပတ်အဆိုတော်ရဲ့အစားအသောက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအစာရှောင်ခြင်းအလေးချိန်လျှော့ချရေး။ ၇ ရက်သူကဖယ်ရှားပစ်ရရန်အထိမှ ၆ ကီလိုဂရမ်။ သူမပျော်ရွှင်စွာမျှဝေသူမ၏"လျှို့ဝှက်ချက်လက်နက်"။
အစားအသောက်များအတွက် ၇ ရက်
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အရက် နံနက်စာ နေ့လယ်စာ ညစာ
တနင်္လာနေ့ ပေါင်း buckwheat နှင့်အတူအသီးကိုသီး၊အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် အသုပ်နှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း၊စွပ်ပြုတ်ကိုပန်းသီး ငါးပြုတ်ဖြစ်သည်၊တစ်ဖန်ခွက် kefir
အဂၤါေ Buckwheat နှင့်အတူဒိန်ချဉ်၊ပန်းသီးဖျော်ရည် ဂျုံယာဂုနှင့်အတူကြက်သားနှင့်ဒိန်ခဲ(အနိမ့်အဆီင့်) ကန္တုိနှင့်အတူအခြောက်လှန်းသီးနှံများနှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊နို့ဖန်ခွက်
ပတ်ဝန်းကျင် Buckwheat နှင့်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်မုန့် အသုပ်နှင့်အတူငါးနှင့်ပုဇွန်၊လတ်ဆတ်တဲ့လိမ္မော်သီး အသုပ်:အနီ၊အသုတ်နဲ့အခွံမာသီး၊အခြောက်လှန်းအသီး compote
ကြာသပတေးနေ့ နှင့်အတူဒိန်ချဉ်၊အသီးဖျော်ရည် ဂျုံယာဂုနှင့်အတူရွှေဖရုံသီး၊hibiscus လက်ဖက်ရည် ကြက်သားရင်သားကင်ဆာအတွက်ဒိန်ချဉ်ဆော့စ်၊ကိုကိုး
သောကြာနေ့ ပေါင်း groats သို့မဟုတ်သီးနှံ၊မကောင်းသောဒိန်ချဉ် နှင့်ပဲပိစပ်ဆော့စ်ကိုဖုတ်ငါးများ၊လိမ္မော်သီးဖျော်ရည် အသုပ်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်။
စနေနေ့ Buckwheat အပေါ်ရေ kefir နှင့်အတူချက်ပြုတ်ကြက်သားရင်သားကင်ဆာ၊အခြောက်လှန်းအသီး compote ပင်လယ်သုပ်၊ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်
တနင်္ဂနွေ နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ကိုကိုး ငါးစွပ်ပြုတ်၊စိမ်းလန်းသောလက်ဖက်ရည် အသုပ်:မုန်လာဥ၊ထောပတ်သီး၊သခွားဖရုံသီး၊ပန်းသီးမှအသီးဖျော်ရည်
အစားအသောက်အဆိုတော်များ buckwheat သည်ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအသောက်နှင့်အညီစနစ်တကျရွေးချယ်ထားသောအ dieters။ တစ်ပတ်ဖြတ်သန်းမပါဘဲအပေါ်စိတ်ဖိအူလမ်းကြောင်း။ အစေရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြီးထက်ပင်ဆန့်ကျင်ကင်ဆာအစားအသောက်။
အစားအသောက်အတွက် ၂ ရက်သတ္တပတ်
နေ့ နံနက်စာ သရေစာ နေ့လယ်စာ သရေစာ ညစာ
၁ Buckwheat groats၊ရေထဲမှာစိမ် မီးဖို-အကျိုးပန်းသီး Buckwheat နှင့်ဟင်းချိုနှင့်အတူအမှတ်အသား၊ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် ဒိန်ချဉ် အသားပြုတ်သောငါး၊သခွားသီးသုပ်
၂ ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူ လိမ္မော်ရောင် ကန္တုိပေါ် buckwheat နှင့်အတူကြက်ဥ သခွားသီး ဂျုံယာဂုနှင့် ၂ ပြုတ်ကြက်ဥ
၃ အဖြစ်ပထမဦးဆုံးနေ့+လိမ္မော် ဒိန်ခဲ အပေါင်းငါးနှင့်အတူတစ်သုပ်မုန်လာဥနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ် ဒေါက်တာဒိန်ခဲနှင့်အတူ Buckwheat နှင့်အတူမုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီ
၄ နှင့်အတူချဉ်မီးဖုတ်နို့ ပန်းသီး ပြုတ်ကြက်သားနှင့်အတူရှိနေ buckwheat သခွားသီး ဖုတ်နှင့်အတူနွား kasha
၅ ဂျုံယာဂုနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်၊ဒိန်ချဉ် ကျွဲ ဆက္လက္ဖတ္ရႈ၏ကြက်သားနှင့်အတူဂေါ်ဖီထုပ် ဒိန်ချဉ် Buckwheat နှင့်အတူငံပြာရည်မှကြက်သား
၆ ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူ ပန်းသီးဒိန်ခဲနှင့်အတူမီးဖိုတဖို၌ Buckwheat ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို သခွားသီး ဂျုံယာဂုနှင့်အတူဖုတ်သခွားဖရုံသီး
၇ Buckwheat နှင့်ပြည့်စုံ ၀%ဒိန်ချဉ်
၈ Buckwheat နှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကန္တုိ၊ပန်းသီး လိမ္မော်ရောင် Buckwheat ဂျုံယာဂုနှင့်အတူပင်လယ်ရေမှော် ပန်းသီး နူး ၂ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နေ့
၉ ထပ် ၁ နေ့ ဒိန်ခဲ Buckwheat နှင့်ဟင်းချိုနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက် ဒေါက်တာငါဒိန်ခဲ အဖြစ်အတွက် ၃ နေ့
၁၀ နှင့်အတူဒိန်ချဉ်နှင့်ခန်းခြောက်သီးနှံများ ပန်းသီးမီးဖုတ် ဟင်းခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ဂျုံယာဂု(စားစရာ) ပန်းသီး ပြုတ်အမဲသားနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်
၁၁ နေ့ ၁ ကျွဲ ဖန်ဆင်းရှိနေမှ buckwheat၊လိမ္မော်သီးဖျော်ရည် အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် အဖြစ် ၅ ကြိမ်မြောက်နေ့
၁၂ နှင့်အတူဒိန်ချဉ်နှင့်ပျဉ် ပန်းသီး ဂျုံယာဂုနှင့်အတူမှိုနှင့်တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်သုပ် ဒိန်ခဲ Buckwheat ဂျုံယာဂုနှင့်အတူစည်သွတ်ပြောင်းဖူး
၁၃ နေ့ ၁ ကန္တုိပန်းသီးနှင့်ဒိန်ခဲ ဆက္လက္ဖတ္ရႈ၏ကြက်သားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို အသီးကိုသီးသုပ် အသားပြုတ်သောငါး၊သခွားသီးသုပ်
သာ ၂ ရက်သတ္တပတ်၊ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စကားကိုဤအစားအသောက်နိုင်တက်ပစ်လိုက်မှ ၁၂ ကီလိုဂရမ်။ ဒါဟာထက်မဆိုးရွားတဲ့အစားအစာ Protasov(ကြာမြင့်သောအလုပ္)၊အထက်အ Dukan အစားအစာ၊မလိုအပ်ပါဘူးအတော်လေးအလုပ်ရှုပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အပေါ် keto အစားအသောက်။ သူမ၏ကြွယ်ဝသောအစားအသောက်မည်မဟုတ်အောင်သင်ကဲ့သို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်အပေါ်အနိမျ့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစားအသောက်။
ကောင်းစွာ buckwheat ဖော်ပြခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်၏၊ထိုအသွေးကိုဆေးကြော။ စေလျှင်သတ္တုချ၊အကူအညီနုပျိုကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနှင့်ရှို့ခြင်းအမလိုချင်တဲ့အဆီအတွက်ခါးဧရိယာ။
ညဦးယံ၌တစ်ဖန်ခွက်ထဲမှာသွန်းလောင်း။။။။၂ အ buckwheat(တောင်)၊နှင့်ထိုအလောင်းအနိမ့်အဆီဒိန်ချဉ်။ နံနက်ယံ၌ရရှိလာတဲ့အရောအနှောထည့်သွင်းကုန်တယ်သုတ်။ ဒီရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူတြင္လည္း။ ဖယ်ရှားရပ်တန့်အတွက်အအူနှင့်ဇီဝြဖစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်။
စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့နှင့်အတူဆိုတဲ့အချက်ကို ၁ ထမ်းဆောင်များ buckwheat သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ၃၀ ဂရမ်နှံ၏(အကြမ်းဖျင်းသောအလေးချိန်တစ်ဇွန်းနှင့်အတူတစ်ဆ)။ အတွက်ချက်ပြုတ်ပုံစံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ၆၀ ဂရမ်။
၃၀ ဂရမ်ခြောက်သွေ့သော—၁၁၅ kcal
၃၀ ဂရမ်ပြုတ်–၅၅ kcal။
အလေးချိန်၏တစ်ခွက်ခြောက်သီးနှံအကြောင်း ၂၅၀ ဂရမ်။
တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို၏အလေးချိန် buckwheat ချက်ပြုတ်သည့်အခါ?
Buckwheat တစ်ဦးအိမ်ခြံမြေမှာအပူကုသမှုအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့နှစ်ဦးကြိမ်။ သတိပြုပြီးနောက်အလေးချိန်ချက်ပြုတ်အပေါ်မူတည်ပမာဏကိုထည့်သွင်းဖို့အနှံအရေ။ ကြိုးစားလေ့လာဖို့အတွက်အချိုးအစားအတွက် ၁ ခွက်ဖလားကိုသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ၄၀၀ င့္ဘူး။
Buckwheat များအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်ပွာ-အစားအစာ။ အာဟာဤကာလအတွင်းအတော်လေးနည်းပါးပါတယ်။ သင်စားနိုင်ရုံအနည်းငယ်အစားအစာများ:ပြုတ်ဂျုံယာဂုမပါဘဲဆား၊ဆီ၊အဆီ-အခမဲ့ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်၊အစိမ်းရောင်ပန်းသီး။
ရေကိုဖြစ်သင့်သည်ယစ်မူးအတွက်န့်အသတ်အရေ။ ကြိုးစားအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်သောက်အထိ ၁၆:၀၀။ ဒီရှောင်ရှားနံနက်နႏြင္း၏။
၏အဓိပ္ပါယ်"လက္"ဟူသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်၏အဓိကပါဝင်သောအစားအသောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စများတွင်၊buckwheat။ ထို့ကြောင့်၊ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ရှားပါးဗီတာမင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သည်ယူ multivitamin ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။
အများဆုံး dieters တိုင်ကြား unsalted ကိုစားရန်ခက်ခဲကြောင့်၊သူမသည်အခက်ခဲ။ အောင်မုန့်ညက်သာယာသောအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ၊ဒါပေမယ့်နိမ့်ကယ်လိုရီ၊ဓါတ်စာသင်စားနိုင် buckwheat၏ချပ်နှင့်အတူလိမ္မော်သီးသို့မဟုတ်ရှောက်။
ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်၎င်း၏pluses နှင့် minuses။ အဆိုပါအားနည်းချက်များပါဝင် contraindications။ အေးစက်သူတို့အဖြစ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်သုံးအမျိုးအစား:
နောက် ၁၈:၀၀၊မဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်၊သာတစ်ခွက် kefir သို့မဟုတ်ချဉ်မီးဖုတ်။
ပထမအလုပ္အစာစားနံနက်စာနှင့်အတူယာဂုသို့မဟုတ် buckwheat နှင့်အတူဒိန်ချဉ်။ မုယောစပါးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်။
အပေါ်အခြေခံပြီးအထက်ပါ၊အလေးချိန် stabiliziruemost၊နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါတက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဆီ၏။ တဖြည်းဖြည်းသင်ဖို့အသုံးပြုဒီကမ္လာသတိထားမိမည်မဟုတ်ဘယ်လိုဟန်ချက်ညီတဲ့အစားအစာကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုအစုတ်အစားအစာကနေနေ့စဉ်အစားအသောက်။
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်။ အစိမ်းရောင် buckwheat–အသက်ရှင်၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊အာဟာရဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်။ နူးညှောက်အစေ့များအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာသုပ်၊ပူပြင်းတဲ့ဟင်းလျာများနှင့်ပင်အချိုပွဲ။ အစိမ်းရောင်ပဲပင်ပေါက်အဇီဝြဖစ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နှင့်အချိုးအဘူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွားအမျိုးသမီးသည်ရေပန်းစားသောစာရွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူပွတ်တိုက်များအတွက်အူ။ ဒီမှာဖြစ်ပါသည်:ထုခုတ်အညှောက်ပေါက် buckwheat၊စမုန်နက်နှင့်ရောနှောနှင့်အတူသခွားသီးအဘို့အတစ်သင်းလုံးကကစားသမား၊အသုံးပြု၊သံလွင်ဆီ။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးအတွက် ၁၀၀ ဂရမ်စားသုံးခြင်း ၁၉၀ ကယ်လိုရီ။ အညွှန့်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်:ညအချိန်တွင်အလောင်းနံနက်၌ရေနှင့်အရင်ဆေးသို့သွန်းလောင်းနက်ရှိုင်းတဲ့ပန်းကန်။ အများအားဖြင့်၊အားဖြင့်ယနေ့ညနေရှိပါတယ်ရောဂါပိုး။
Buckwheat ဘာဂါ။ အစားအသောက် meatballs သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:buckwheat၊ကြက်သွန်နီ၊မုန်လာဥ၊အာလူး၊ကြက်ဥ၊ဟင်းရွက်ဆီ၊ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း။ Grits ပြုတ်၊အေးရော။ ပြီးလျှင်ခုတ်အာလူးနှင့်မုန်လာဥ။ သေးငယ်သောအကြက်သွန်ခုတ်ခြင်းနှင့်ကြော်။ ချိတ်ဆက်အတူတကွအားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပုံစံ။ ပူပြင်းဆီ၌နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ကြော်။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးအတွက် ၁၀၀ ဂရမ်စားသုံးခြင်းဟာ ၆၄ ကယ်လိုရီ။
Buckwheat ရှိနေ။ နံနက်နံနက်စာအဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ကျန်းမာလျှင်၊အတူလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် buckwheat စားရန်ရှိနေ။ သူတို့ကိုချက်ပြုတ်ဖို့အလွန်လွယ်ကူစွာ။ နူးညံ့သောသည်အထိပြုတ်၊အေးမြနှင့်ထည့်ကြက်ဥ၊ဒိန်ချဉ်နှင့်အနည်းငယ်ဇွန်းမုန့်ညက်။ သာအပူကြော်ဒယ်အိုးတင်။၊မုန့်စိမ်းကိုထုတ်။ နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ကြော်။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကို ၁၀၀ ဂရမ်၏အစားအစာ–၁၂၁၊၁ kcal။
Buckwheat နှင့်အတူနို့။ ပြင်ဆင်ထားရန်၊ယူ:buckwheat–၁ ခွက်ဖလားကိုနို့၊၁။၅%အဆီ–၂ ခွက်။ ဆူပွက်နို့၊လျှော့ချဓာတ်ငွေ့နှင့်ထည့် buckwheat။ ချက်ပြုတ်များအတွက်ခန့်မှန်းခြေ ၇-၁၀ မိနစ်၊ဒါကြောင့်နူကလီးယပ်အစေ့များထင်ရှားခဲ့သည်။ လျှင်သင်သာအဆီနို့ရည်နှင့်ရောရနိုင်။ သင်စားနိုင်၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသကြားဓာတ်ကဆက်ပြောသည်။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးအတွက် ၁၀၀ ဂရမ်စားသုံးခြင်းဟာ ၁၁၈။
Buckwheat နှင့်ကြက်သားရင်သားကင်ဆာ။ ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အတွက်အနှေးအိုးသို့မဟုတ်ဒယ်အိုး။ သုံးပြုမှုကိုတစ်ပန်းကန်အဘို့အသင့်လျော်နံနက်စာနှင့်ညစာ။ အမျိုးသားများအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ကြိုးစားနေ၊ဤပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ပေါင်းစပ်ဖို့ကူညီပေးပါမည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကျေနပ်နှင့်ရရှိရန်အနည်းငယ်အပိုပေါင်။ လျှင်သင်ချက်ပြုတ်အတွက်ဒယ်အိုးပထမဦးဆုံး saute ကြက်သား၊ပြီးတော့ဆက်ပြောသည်သောထမင်း။ အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့အတွက်အနှေးမီး။ အပေါ်နေရာ၊နှင့်အတူအစီအစဉ်၊တစ်ပန်းကန်လုံးတွင်ထည့်သွင်းအားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ၊အဖုံးနှင့်အတူရေ။ ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု ၁၀၀ ဂရမ်နှုန်းအစားအစာ–၁၄၀ kcal။
လမ်းဖြင့်၊အားကစားသမားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစားအသောက်။ သင်ကိုယ်အလေးချိန်မှ buckwheat။ အရေအတွက်အစားအစာပေါ်မူတည်၏။ သို့သော်ထိုသို့ထက်လျော့နည်းဖြစ်သင့်၏၂၅၀ ဂရမ်ခြောက်သွေ့သောင့္ ၅၀၀ ဂရမ်ကြက်သားတစ်နေ့လျှင်။
Buckwheat နှင့်ဟင်းချို။ ထိုဟင်းရည်ယူရန်လိုအပ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊အထိန်းနှင့်အနည်းငယ်ဇွန်းထည့်သွင်းနှံ။ အာက္ေလူးစားကိုထည့်သွင်း၊ထုကုန်တယ်အစိမ်းရောင်နှင့်ခြစ်မုန္လာဥနီ။ ဒါဟာမလိုအပ်ဖို့ဟင်းချိုထောပတ်မှထည့်ပါကြောင့်၊အဓိကရည်မှန်းချက်ဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားဆီ။ ကယ်လိုရီ–၃၈။
အစားအသောက်ဟင်းရည်။ အဂုကသိပ်မပြင်းထန်ပြီး၊သင်ဖြည့်စွက်အနိမ့်-ကယ်လိုရီဟင်းရည်။ င်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုလောင်းကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငရုတ်ကောင်း။ ပြီးနောက်အေးမြပါစေနှင့်မှောင်မိုက်နှင့်ကြော်ကြက်သွန်နီနှင့်အတူ။ ချက်ပြုတ်သည်အထိပြုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ဖို့စင်ကြယ်သော။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးနှုန်းဖြင့် ၁၀၀ ဂရမ်–၅၆ kcal။
Buckwheat နှင့်အတူပန်းသီး။ ပဲမသုံးပါနဲ့အဆင်သင့်လုပ်မရှိဘဲဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်။ သင်သိလား၊အမျိုးရောင်းချဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းထားသည်များ၏ကြီးမားသောအရေ emulsifiers နှင့်အရသာစှ၏ဓာတု။ အကျိုးဆက်အဆိုးရွားစေနိုင်သည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့။ ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင့်လျော်ချက်ပြုတ်၏လက်ငင်း။ ကယ်လိုရီ–၉၈ kcal။
Buckwheat ကော့တေးအဘို့အအလေးချိန်အရှုံး။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလိုတာစိမ်းမြီးနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဖန်ခွက်ဒိန်ချဉ်၏။ ပူနှံမများအတွက်ရည်ရွယ်ဒီသောက်စရာ။ သင်ဆဲခခြှေဲအတွက်အစွမ်းထက်အဖျော်အချောသည်အထိ။ ကယ်လိုရီ–၅၁ ကယ်လိုရီ။
အစားအသောက်ကွတ်မှဖန်ဆင်းတော် buckwheat မုန့်ညက်။ အဘို့အကစ်သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:သစ်ကြံပိုး၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ငှက်ပျောသီး(ဖိအတွက်သန့်စင်)တစ်ဦးမုန့်ညက်မှဖန်ဆင်းတော် buckwheat။ သကြားကိုထည့်သွင်းကတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး။ မုန့်စိမ်းပွားခြင်း၊ပုံစံငယ်ဘောလုံးနှင့်နေရာတစ်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်။ မီးဖို၌ဖုတ်သည်အထိ။ ဒီကုသကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့သကြားမတရားသော၊မကျိုးပါ။ ကယ်လိုရီ–၁၅၁ kcal ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ၁၀၀ ဂရမ်နှုန်း။
နှင့်အတူဖုတ်စိမ်နို့ရည်သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်။ ကာလအတွင်းအမြန်အစားအစာနှင့်အစာရှောင်ခြင်းရက်အမျိုးသမီးများလောင်းစိမ်ဖုတ်ထားသောနို့၊ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ် kefir။ စေ့များမှာနေ့ချင်းညချင်းစိမ်တစ်ဖန်ခွက်ထဲမှာအချဉ်နို့ထုတ်ကုန်၊နှင့်နံနက်ယံ၌သင်စားနိုင်၊ထိုရလဒ်အ muesli။
အဂၤါ၏ဤပန်းကန်သုံးလို့ရထိန်းညှိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆီပရိုတိန်း၊အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊နှင့်အပေါင်းအစိမ်း buckwheat ဖို့သင်ခွင့်ပြုအလေးချိန်လျင်မြန်စွာဆုံးရှုံး။ တ ၁၀၀ ဂရမ်စားသုံးခြင်း ၈၄၊၁ kcal။
Buckwheat ခေါက်ဆွဲ။ ချစ်သူများများအတွက်ခေါက်ဆွဲပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကချက်ပြုတ်နိုင်နှင့်အတူကြက်ဥနှင့် buckwheat မုန့်ညက်။ မုန့်စိမ်းပွားပါးလွှာစွာထွက်လှိမ့်နှင့်ပါးလွှာသောဖြာ။ ချက်ပြုတ်ခေါက်ဆွဲပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ၌၇ မိနစ်။ ကယ်လိုရီအကြောင်းအ ၂၁၄ kcal။
ဂျုံယာဂုနှင့်အတူမှို။ ဒီပန်းကန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အတူကိုယ်ခန္ဓာကိုကသဘာဝပရိုတိန်းအစားအစာ။ မှိုခုတ်နှင့် saute ကြက်သွန်နီနှင့်အတူဒယ်အိုးပေါ်မှာအဖုံးအောက်မှ ၂၀ မိနစ်။ သူတို့ကိုပျော့ပြောင်းသည့်တိုင်အောင်။ ပြီနောက်ဟင်းအတွက်ချက်ပြုတ် buckwheat နှင့်အတူမှို။ မျှတည်ထားပါ ၁၀ ပိုမိနစ်။ ကယ်လိုရီအကြောင်းအရာအတွက် ၁၀၀ ဂရမ်အစားအစာ–၁၀၅၊၈ kcal။
ကန္တုိ။ Buckwheat နှင့်အတူထောပတ်၊ချောချောမွေ့မွေ့မရှိမှီနှိုးဆော်၊ပေါင်းစပျစ်သီးပျဉ်သို့မဟုတ်အပိုင်းပိုင်း၏ပန်းသီး။ ဖ်ာ္ေျဖေရးအထိအစိုးရ၏အမြှုပ်ကြက်ဥနှင့်ပေါင်း ၁ ခွဲ၏။ ပုံစံအဘို့မုန့်ဖုတ်အမဲဆီနှင့်အတူထောပတ်ကိုငါသွန်းလောင်းနှင့်ရိုက်နှက်။ ရန်မီးဖို Preheat ၁၈၀ ဒီဂရီ။ ဒီကန္တုိဘို့အသည်စုံလင်သည်၊သို့မဟုတ်ညဦးယံဘောဇဉ်။ အကယ်လို ၁၇၆ kcal။
ရှိနေ။ အစပိုင်းတွင်အလုပ်ရှိနေလိုကော်ဖီနှံမုန့်ညက်သို့။ သို့မဟုတ်ဝယ်အဆင်သင့်လုပ်မှာ။ Buckwheat ရှိနေပြင်ဆင်နေကြပါတယ်အလွန်ရိုးရှင်းစွာ။ တစ်ပန်းကန်ထဲမှာရောနှောကြက်ဥ၊နို့(နှင့်ရောရေနှင့်)—၂ ခွက်များ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ–၂ ဇြန္းကိုသတိရတဲ့ဟင်းငါတို့သည်အစားအသောက်၊နှင့်အကျိုးဆက်ကိုသကြားနှင့်ဆားသင့်မေ့လျော့။ ရရှိလာတဲ့အရောအနှောထည့်သွင်းခဲ့သည် buckwheat မုန့်ညက်။ မုန့်စိမ်းကိုအသင့်အရည်ဖြစ်ဖြစ်၊တစ်ဦးရှိသည်ဖို့ကောင်းပျံ့နှံ့ပေါ်ဒယ်အိုး။ ကယ်လိုရီအကြောင်းအရာအတွက် ၁၀၀ ဂရမ်အစားအစာ–၂၂၉၊၁ kcal။
ဂျယ်။ Buckwheat ဂျယ်လီအတွက်ရည်ရွယ်သည်တစ်နေ့၏သန့်ရှင်းရေး။ သူသည်ကောင်းစွာအပြင်အဆိပ်ဖယ်ရှားပေးနှင့်ပိုလျှံအရည်။ ဒီလျော့နည်းစေသည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုရစ်အက်ဆစ်။ မသောက်ရန်အကြံပြုဂျယ်လီအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါ။ မလိုချင်သောအရလဒ်များကိုအတွက်ပိုအလေးချိန်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကို။ တဦးတည်းဝတ်ပြုအသောက်ပါရှိသည် ၅၅ ကယ်လိုရီ။
"ငါခရီးသွားလာ။ အထူးသဖြင့်နွေရာသီခရီးစဉ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့သူမခင်ပွန်း။ နှင့်အသက်တာကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွား။ ရိုးရိုးသားသား၊ကိုယ့်အေးလက်အေး။ စားအံ့၊ဦးဆောင်အထိုင်များလူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ပေါင်မရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ငါရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအသွင်အပြင်။ ပေမဲ့၊အဆိုအသူမ၏ခင်ပွန်း၊အတွေးသူကြိုက်မှာအကြှနျုပျကိုမည်သည့်အလေးချိန်။ ကျွန်မဖတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအစာအာဟာရနှင့်အလေးချိန်အရှုံး။ တယောက်အမြင်မတူတဲ့တင်းကျပ်အစားအသောက် buckwheat တက္ကသိုလ်မှဖယ်ရှားဝမ်း၊ကျွန်မအတွက်စိတ်ဝင်စား။ လေးချိန်များဆုံးရှုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရှောင်ရှားရန်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဖိရွေးချယ်ခုနစ်နေ့ကသင်တန်းကို။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ရက်ခဲ့သည်။ အကဲခဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ အားဖြင့်ညဦးယံအ buckwheat စတင်ဖို့နှိုးဆော်။ ဒါပေမဲ့စတုတ္ထနေ့ရောက်တွင်အကြေးခွံနှင့်အမြင်ပထမဦးဆုံးရလဒ်များကို။ ဟေး! ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံး! ယခုဆက်လက်လိုက်နာရန်သင့်လျော်သောအစားအစာ။ အလေးချိန်တိုးမြှင့်ပါဘူး။ Buckwheat ချစ်၊အခုအပေါ်အခြေခံ။၎င်း၏အသုံးရက်ကြာစီစဉ်အစာရှောင်ခြင်းရက်ပေါင်း။"
"ငါသတိရနိုင်၊ကလေးဘဝကတည်းက၊ငါ၏အထွတ်အိပ်မက်ဝတ်ဆင်ရန်အနည်းငယ်သာအနက်ရောင်ဝတ်စုံ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ဘာသာဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့အတက်အသာတအိတ်အတွက်။ ထွက်ခွာပြီးနောက်ကျောင်းငါ့အလေးချိန်ခဲ့ ၁၁၀ ကီမှာကြီးထွားမှု၏၁၆၇ စင်အတွက်ရေတိုအပေါ်လော်တဲ့တုတ်။ အမှုကြောင့်မလျော်ကန်သောအစားအသောက်ခဲ့တဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်။ ငါ့မိဘတွေကငါ့ကိုယူမှပညာရှင်သော်လည်း၊အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါပျောက်ဆုံးနေ၊ထက်ပိုပြီးသုံးရက်အစားအသောက်နှင့်ပြိုကွဲ။ စ၊လံုးကြလႊာေသွား discos၊ကျွမ်းနှင့်အတူယောက်ျားတွေ။ ငါငြူသူတို့ကိုထိုင်နေ။ တနလၤာ၊အယူရန်ဆုံးဖြတ်ငါ့အသွင်အပြင်။ အတူတကွကျနော်တို့သို့ပွေးအတွက်ပန်းခြံ၊အားကစားရုံသို့သွားပြီး ၁၄ ရက်အစား buckwheat နှင့်ဒိန်ချဉ်။ သတိရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအမွှေးအ။ ဒါပေမယ့်အပိုဆုအဖြစ်ငါဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အစားခွဲလိမ္မော်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ ၄ ကီလိုနှင့်ကျွန်တော်သတိပြုမိသောအစာအိမ်။ ငါပျော်ရွှင်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်။ အဆုံးမှာငါ့အလေးချိန်အစားအသောက်ခဲ့သည် ၉၆ ကီလိုဂရမ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်တွေငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုင်ပေါ်တွင်အစားအသောက် buckwheat နှင့်ယခုငါ့အလေးချိန် ၇၆ ကီလို။ အပေါ်ရေခဲသေတ္တာ hoisted အဆိုပါမီနှင့်အပြီးဓါတ်ပုံကိုလျော့နည်းစား။"
"ငါလိုအကြံပေးဖို့အားလုံးကိုအမျိုးသမီး ၅၀ ကျော်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်သည်ကိုယ်ပေါင်စုံတွဲတစ်တွဲ၊ဒီအကူညီလိမ့်မည်ဟုတစ်တင်းကျပ်အစားအသောက်။ တစ်နေ့တာအတွင်းရေအများကြီးသောက်၊လမ်းလျှောက်။ ငါလျော်စွာစုစည်းနှစ်ရက်ကြာဒိန်ခဲနှင့်အရက်။ ငါအနည်းငယ်အချိန်ဇယား၊အရာစာရင်းသင်သည်အဘယ်သို့စားရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ အခွင့်အစားအစာကိုစားနှံ၊သခွားသီးနှင့်စိမ်းလန်းသောလက်ဖက်ရည်မသောက်။ ပြီးနောက် ၂ ရက်၊ခံစားခဲ့တယ်။ နောက် buckwheat အမြန်အစားအစာ၊တဖြည်းဖြည်းထဲမှာထည့်သွင်းသင့်ရဲ့နေ့စဉ်အစားအသောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊အသီးနှင့်အ kislomolochny။ ခံစားမှုကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့၊ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း၊ခန္ဓာကိုယ်သည်စင်ကြယ်။"
ကျိန်းသေအစားအသောက်အလုပ်လုပ်အံ့ဘွယ်သောအမှု။ သို့သော်အကြောင်းမမေ့မလြော့သင့်လျော်သောအာဟာရပြီးခိုင်မာလိမ့်မည်။ အဲငါးအခြေခံပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းပညာရှင်အကြံပေးဖို့လိုက်နာရန်:
မဖြစ်သင့်အရှည်နှင့်အတူကပ်။ မထိခိုက်စေတယ်၊အမြင့်ဆုံးကာလ ၃ ရက်ပေါင်း။
နောက်အစားအသောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကိုယ်အပိုပေါင်လျှင်ရေတွက်တဲ့ကယ်လိုရီစားသုံးမှု။ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်မှုနှုန်းအဘို့အအမျိုးသမီးနှင့် ၁၇၀၀ kcal အမျိုးသားများအဘို့နှင့် ၂၀၀၀ kcal။
နေ့စဉ်အတိုင်းလိုက်နာကိုယ်အလေးချိန်လျှင်အလေးချိန်မထွက်၊ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အစားအသောက် buckwheat သင့်အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်အဆိုပါ၏ရလဒ်အလေးချိန်အရှုံးခဲ့မြန်ဆန်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့၊နှင့်ပင်အစဉ်အအံ့သြပီတိအပေါင်းတို့သည်အားဖြင့်ချစ်ရသူများလိုက်နာအထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်နှင့်အရက်သောက်သုံးခြင်း။ ယူ"ကုန်း"အ buckwheat အစားအသောက်၊ကိုယ်အလေးချိန်၊နှင့်အသက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်နှင့်အတူအသစ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ခံစားချက်များကို။